Kubatsirwa kweHigh-End Fitness Walkers AKA Rollators
Kuumburuka Walker kana dzimwe nguva kunzi "rollator”Anga aripo kwekanguva semhinduro yakakwana kune vanhu vanoda rubatsiro rwekufamba. Pakutanga yaizivikanwa muEurope isati yaenda kuUS. Yakave inozivikanwa kwazvo kufamba rubatsiro muUS indasitiri yezvokurapa indasitiri nekuda kwekushomeka kwayo dhizaini uye nyore kushandisa zvikamu.
Inowanzo rondedzerwa seyakajairwa Walker iyo ine mana madiki mavhiri, kunyangwe paine mamwe mamodheru anouya aine matatu-mavhiri base. Vamwe vanhu vanoshandisa iyo kutenderera imba kana kunyange kufamba panze, vamwe vanogona kuishandisa kuperekedza navo pane yavo yekurovedza maitiro kana vasingachakwanise kubata muyero wavo kana kunetseka kufamba vasina rubatsiro.
Rudzii rwe rollator ndizvo?
Dhizaini uye zvikamu zve rollator zvinosiyana zvichienderana nekambani yaigadzira uye ingave iri yemhando kana yekutakura rollator, iyo zvakare yakajairika. Nzira iri nyore yekutsanangura iyi mhando ye kufamba chishandiso ndechekuti ine gumbo ina-mavhiri, inouya nemabharanzi kutsigira mushandisi, uye yakagadzirirwa kuve iri nyore kwazvo kupeta. Rudzi urwu rwechigadzirwa runouya zvakajairika nemabhureki mabhureki kubvumira mushandisi kuzara kwemavhiri uye nekukurumidza kwaari kufamba.
Iyo bharaki mabhureki anowanzo kuve neanomanikidza kuburitsa mashandiro ayo anogona kugadziriswa zviri nyore kune simba remushandisi. Rudzi urwu rwebraking system rwakanyatsokodzera kune vanhu vanotambura nechirwere chePasinson, uko iyo rollator inogona kumiswa kana mushandisi akamira asina kufamba.
Imwe yeanonyanya kufarirwa zvishongedzo ayo anoshandiswa pamwe ne rollator mubato wepasi kana pasi pechigaro chetswanda iyo inogona kushandiswa kuchengetedza kana paunenge uchida kuenda kunotenga, unogona kuisa zvinhu pasi mukati mebhasikiti.
Iyo yakapetwa dhizaini inobvumira mushandisi kubata zviri nyore furemu uye chitoro munzvimbo diki kwazvo. Izvi zvinoreva zvakare kuti zviri nyore kwazvo kuzvichengeta mumotokari. Sezvo izvi zvichizogona kushandiswa sechinhu chekurapa, unofanirwa kutarisa nachiremba wako kuti ave nechokwadi chekuti anokurudzira rudzi urwu rwechigadzirwa pamamiriro ako azvino.
Ndokumbirawo zadza fomu pazasi kuti ugamuchire ruzivo maererano nekubvunza kwako. Unogona kutipa runhare ku1-800-80-KARMA, kana ndapota takura nesu patinopindura kubvunza kwako
Zita rokutanga *
Zita rokupedzisira *
Ndapota tipei mamwe mashoko: Manual WiricheyaKumira WiricheyaProduct InquiryReplacement Parts